သူတို့ဟာ Kobo Mini တစ်ခုကို GPS အသွင်ပြောင်းကာပြန်လည်ရှင်သန်လာကြသည်။ | eReaders အားလုံး
သူတို့သည် Kobo Mini ကို GPS အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရှင်သန်လာကြသည်
Joaquín Garcia က | | Kobo
အမေဇုံ eReaders ရောင်းချရသည့်အရေအတွက်သည်များပြားလှပြီး၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအတွက်အကြိုက်ဆုံး eReaders များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာမော်နီတာအဖြစ်သို့မဟုတ်စမတ်စက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဒုတိယအကြိမ်အသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ပြန်လည်အားဖြည့် သင်၏ Kobo Mini သည်ထူးဆန်းသော GPS တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည် ၎င်းသည်နေရောင်ခြည်တွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။
built-in device ကိုအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူများစွာပင်ရန်ရှိသည် ဒီ gadget ကို ebook စာဖတ်သူနဲ့ကွဲပြားအောင်ကြည့်ပါ.
Kobo Mini ကိုစျေးသက်သာပြီးစျေးသက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်သည်
ဟုတ်ပါတယ်, Kobo Mini မှာ GPS unit မရှိဘူး။ Tweepy လို့ခေါ်တဲ့ Builder အသုံးပြုသူလည်းဒီစက်ကိုဖွင့်လိုက်ရုံတင်မကဘဲဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ရုံပဲ။ သင်သည် GPS ယူနစ်ကိုချိတ်ဆက်ထားသော်လည်းသင်သည်ကိရိယာ၏ဘက်ထရီကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့သည် ပြင်ပဘက်ထရီအားဖြင့် ၃၈၀၀ mAh၊ သုံးစွဲသူများအားပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ GPS ယူနစ်ဟာ Kobo Mini ထဲမ ၀ င်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Tweepy ကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ အပိုဆောင်းထည် ဒီ tweepy သည်သင်တို့အများစုကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည့်အတိုင်းမျက်စိနှင့်မမြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည့်ယူနစ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ပြီးတာနဲ့ဆိုက်ကပ်, Kobo software ကိုဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည် အဆိုပါ XCSoar app ကို, Kobo Mini operating system တွင်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစရာမလိုပဲအသုံးပြုနိုင်သည့် GPS application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရလဒ်သည်အပြုသဘောသာမကဘဲအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအကြိမ်ပေါင်းများစွာပုံတူပွားနိုင်သည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည် သင်၏အဆောက်အ ဦး လမ်းညွှန်.
Kobo Mini သည် eReader တစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်သေးငယ်သော screen နှင့်၎င်း၏ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးယခုမှသာရရှိနိုင်ပါသည် ဒုတိယလက်စျေးကွက်မှတဆင့် နှင့်အလွန်နိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာ။ ထို့ကြောင့်ဤ eReader သည် Basic Kindle ကဲ့သို့ပင်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » ကုမ္ပဏီများမှ » Kobo » သူတို့သည် Kobo Mini ကို GPS အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ရှင်သန်လာကြသည်
Connecticut စာကြည့်တိုက်များတွင် ebook များအတွက်သီးသန့် application တစ်ခုရှိသည်
Goodreads သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ebooks များ၏မှတ်စုများကို Kindle ပေါ်တွင်ထိန်းချုပ်ပြီးတည်းဖြတ်နိုင်သည်